Fanasemporana - Merinaforever - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Fanasemporana - Merinaforever
Ny fitondrana isian’ny firaisampirenena
Dia misy toe-javatra mampahonena
Dia ny fanapotehana ny anaram-poko
Asa ny an'ny hafa fa ny ahy hotompoiko
Vonoina ho faty ny mangorangorana
Izany no politikan'ny fanasemporana
Ny fahamerinako dia omeko toky
Fa tsy avelako ho faty na mitsilopy
Nahoana no izaho no lazaina fa mpihantsy
Lazaina fa akoholahy mampiseho fantsy?
Tsy azo atao ve ny mianatra mandefitra
Ka hanajana ny hafa amin'ny toetra hentitra?
Dradraina an-kabary,atao an-taratasy
Fa tsy Merina intsony aho fa Malagasy
Mba mitonona ho Merina aho rehefa misy hirika
Dia tsapako fa maro ny maso mivotirika.
Misy mihitsy aza no sahy manontany
Fa tsy fandranitana adim-poko ve izany.
Izany no saran'ny firaisam-pirenena
Manery ny fanadinoina ny an'ny tena
Manao azafady re ry ambanilanitra
Fa Imerina dia mbola misy lanja sy hanitra
Sady tiako no mamiko ka tsy atakalo
Tsy ieren-jiolahy,tsy anjakan-dahalo.
Ny maha-Malagasy , atao an- tery setra
Misy tia izany angamba,fa tsy ny rehetra
Merina aho aloha,asa ! azonao angamba
Ary aleoko Merina ,tsy ankibon’ny mamba
Izay zava-dratsy ho an’ny Merina hatrany
No nohezahan’ny vazaha mpanjana-tany
Ny Merina natahorany toy ny rano manonja
Ka novonoina,nasesi-tany,nampidirina am-ponja
Mba hanatanterahany ny tetikady tamin’izany
Dia notohanana tsara ny avy any anindran-tany
Natao filoha,minisitra,ary fonksionera
Nefa ny fanjakan’ny Merina no tiana hazera
Kanefa i Ramerina tsy maintsy akombom-bava
Ka izany no nampakarana an-dRatsimandrava
Fa izy dia anisan’ireo mety ho afa-misabaka
Ka angamba mety raha omena azy ny laka
Kinanjo tsy naharitra fa norarafan’ny mpamono
Satria lazainy fa Merina io ka tsy maintsy atono
Teo Ambohijatovo,toy ny kary ampamoloana
Ireo zana-bazaha no.... nifanome fotoana
Niilaza Imboasalama fa tompon’ny aina
Ka fady ny vono olona ho an’ny Merina misaina
Kanefa izy indray no atao iandronan’ny tseroka
‘Zany no novoizina mba hanetseman-keloka
Dia samy efa fantantsika daholo ny manaraka
Nafandimby teo : Tandroy , Betsimisaraka
Asa indray ‘zay hataon’Imerina sy Imamo !
Fa ho avy indray angamba ny Bezanozano.
Dia ifandimbiasan’ny hafa eo ilay toerana
F’izany no voalazan’ny lalam-panorenana.
Ary ny maro an’isa no manao ny lalàna
Ka nahavoa an’Imerina hatrany ampiandohana
Izany no anaovako ho toy ny tsy misy
An’io rafitra io satria be no ho vitsy.
Maharikoriko ahy ilay « Demokrasia »
Fa manery ny ikambanana amin’i Rainimaria
Amin’izay indray,dia manaiky ilay vahoaka
Raha ampanantenaina vary tapa-kapoaka
Maro ny tsy mahalala ny politikan-tsingala
Manan-jo hifidy daholo na ny bado na adala
Ka lava loatra ity ka aoka aloha ho faranako
Ka mba mihevera re ry Merina namako
Fa raha tsy hioitra isika,ary tsy hiova toetra
Tsy aleo ve resahana dieny izao i Maroantsetra ?
mishou (01/04/2005 09:11:05)
Miala tsiny aminao merinaforever aho raha manoratra ho anao fa tena tsy mamely amiko ny tononkalo toy itony, mahamenatra. Merina toa anao ary andriana mihitsy aza @ firazanana, fa tsy izany akory no midika fa inona aho.
Mipatraka aty frantsa aho izao, black no hiantsoana ahy, mazava aminao angamba ny lanjanao na merina ianao na andriana na inona tany @ taninao tany, tsy any ny olana, homme na femme de couleur ianao ary mba hanamora ny fiainana dia black no iantsoana anao. Ka avelao any izany resaka izany fa sady tsy mampahia no tsy mampatavy no sady tsy mitondra soa na ho anao na ho an'ny mpamaky na ho an'izay olona "ciblé" nao. Fivondronam-ben'ny afrikana no misy anao, ary tany "sous dévéloppé" fa mody hatsaraina tsy handratra fo dia lazaina fa tany andalam-pandrosoana, ka na merina ianao na côtier, madagasikara no misy anao ary isaina avy any ambany @ lisitry ny tany mahantra indrindra ny kilasy misy azy raha tiana ho viata haingana ny fanisana.
Misy fahendrena amiko ny miezaka hanampy ny mpitondra @ fomba rehetra hampandroso ny gasikara tanindrazana fa tsy ny fanindraindrana izay niavianao.
Misaotra anao namaky hatr@ farany. Miala tsiny raha mavesatra ny fiteny fa izay no fomba hahitan'izao tontolo izao anao.
rabona (01/04/2005 19:40:14)
izany no olona hatao hoe manan-tsaina sy nianatra ,nahay nanazava sy diplomaty 'mishou'
raha azoko tsara ry merinaforever dia ny "merina tsy Malagasy satria hoy ianao hoe "fa tsy merina intsony aho fa malagasy" diso ianao fa izaho merina taranaky ranavalona fa MALAGASY , fa aminao ny merina inona kay andriamatoa ?tena vao maika manambany ny razako ianao , ny hany hangatahako aminao dia mianara tsara aloha ny tataran'ny malagasy sy ny niaviany avy eo vao manoratra eto ,fa @ vazaha ianao mainty sady mahanitra , ny olona miala ao @ fahantrano no hiadiana fa tsy ny mahamerina sy ny tsy mahamerina , ianao ilay kely ka te hijanona kely , te heverina any @ taona tsy fantatro , ary mitady hampiady foko ianao diniho tsara anie raha manantsaina ianao e!
ny olona diso lalana sy ao @ fahajambana tanteraka toa anao no mila hahitsy ary aza gaga raha be ny mpanananatra fa tena tsy toe-tsaina merina izany fa toetsain'ny olona ambany sy tsy mahatakatra lavitra ,mahereza fa mbola be ny ezaka zatovo
Merinaforever (01/04/2005 23:02:51)
Miala tsiny fa raha "tsy mamely" aminao ny tononkaloko dia avelao ho an'ny hafa fa aza vakiana.Tsy afaka hanery anao aho na hiangavy anao mba hankamamy azy.Ataoko fa na mahamenatra anao aza ny votoatiny,dia tsy maintsy misy foana faly sy ravo amin'izany na tsy miteny aza.Hajao ary izy ireny ka avelao handinika ho azy fa tsy hitelina ny voatsakonao.Raha misy tsy mazava aminao fa maizina dia ataoko fa tsy hadisoako foana.Raha dinidinika momba izany no tediavinao dia mandehana any amin'ity adiresy ity www.rktmb.org fa tsy eto.
Marihiko fa ny tenako dia tsy voatery handraraha izay fomba fijerin'ny vazaha ahy.Raha Mena na Fotsy daholo no fahitan'izy ireny ny olona any Amerika dia tsy misy mampihetsi-bolomaso ahy izany.'Zay fomba fahitany azy dia azy.
sonwin (10/04/2005 16:05:00)
mishou sy rabona> tsy tokony ho toy izany ny handraisana ny tononkalo sahala itony. Azo atao ny manana fomba fijery positivisme.Satria raha ny fahitako azy tsy misy resaka racisme na fiheboheboana ilay tononkalo fa misarika ny namany mitovy aminy ho tonga saina izy.
Daty : 30/03/2005
Mpamangy : 1488